1. Zvinotendwa kuti vanhu vazhinji vanogona kunge vakave neakare maakaundi eaka Instagram avasingachashandisi. Asi haina kuvhara uye kusiya yako account yega, saka ruzivo rwako nemifananidzo zvinoramba zviri online. Naizvozvo, kuitira kudzivirira vamwe kubva mukuwana iwo ruzivo uye mifananidzo. Nhasi tichazivisa matanho ekudzima Instagram account, nekudzima Instagram account, zvinogona kuitwa nenzira mbiri: kudzima kwenguva pfupi account yeA Instagram uye kuidzima zvachose. Kana iwe uchida kuziva izvo zvaunofanirwa kuita, ngatitarise.
2. Maitiro ekumisa kwenguva pfupi account ye Instagram
3. Zvekugadziriswa kwenguva pfupi kweiyo Instagram account, ichaita muridzi weakaunzi, vateveri neruzhinji rwevanhu. Kutadza kuona maakaundi kana kuita zviitiko pane yakavharwa account. Nekudaro, iwo mukana weiyi mhando yekuvharwa kweakaunzi ndeyekuti iwe unogona kutangazve kumisikidza gare gare. Matanho ekudzima kwenguva pfupi account yako yeA Instagram anotevera: Kutanga, enda Nekudzima yako Instagram account, iwe unofanirwa kupinda mukati kuburikidza newebhusaiti browser chete. Haugone kuvhara kuburikidza neiyo Instagram app
4. Kana wapinda muhurongwa Dhinda kuisa peji yako peji.
5. Wobva wadzvanya pane edit bhatani bhatani.
6. Gare gare kana uchinge uchipinda iyo peji yekugadzirisa peji Unogona kudzvanya bhatani. "Bvisa account yangu kwechinguva"
7. Iwe unozobva wakurudzirwa kusarudza chikonzero chekumisa account yako kwenguva pfupi uye nyora yako Instagram account password.Kana iwe uchinge wapedza zvese, tinya bhatani. "Kwechinguva kudzima mushandisi account" zvinoitwa.
8. Maitiro ekudzima Instagram account zvachose
9. Kubvisa zvachose yako Instagram account ndeyekudzima zvachose yako account uye yako yese data. Uye haigone kupora zvakare Matanho ekudzima zvachose Instagram account anotevera - Nhanho yekutanga iwe enda ku >> https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ nekupinda muakaundi ye Instagram kuburikidza newebhusaiti webhusaiti chete - Wobva wadzvanya bhatani. "Delete .. (zita reakaundi yako) .." zvaitwa. Nekudaro, iwe ukangodzvanya bhatani reakaundi account, yako account haizobviswa ipapo. Asi zvichavanzwa Uye ichabviswa pane yakatarwa zuva uye nguva Kana zvisiri zvechizvino, account yako ichadzimwa. Iwe unogona kudzoka uye kukanzura iyo account kubviswa. Asi mushure menguva yakatarwa uye nguva zvapfuura, account yako ichadzimwa zvachose uye haigone kudzoserwa.